ဗစ်တိုးရီးယားလေးအတွက် အမှန်တရားကိုပူးပေါင်းရှာဖွေမယ်ဆိုတဲ့ လင်းလင်း | Duwun
အခုဆိုရင် နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လင်းလင်းက သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အခုချိန်မှာ နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိနေတာပါ။
အဆိုတော် လင်းလင်းက သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အမှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေပြည်တော်ကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီအမှုကိုလည်း သူ့ဘက်က တတ်နိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’နေ့လယ်ကတည်းက နေပြည်တော်ကိုရောက်ပါတယ်။ သေချာတာကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုကို ကိုသက္က၊ သမီးလေးရဲ့ မေမေဖေဖေ၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုထမ်း တာဝန်သိမိတ်ဆွေအချို့နှင့် ကျွန်တော်အပြင် မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံ အရင်းခံပြီးပါဝင်ကြမယ့် ရှေ့နေ ကိုမျိုးဇော်ဦး၊ မရွက်နုတို့နဲ့အတူ တက်နိုင်တဲ့အား, နိုင်တဲ့ဝန်နဲ့ ပြီးဆုံးတဲ့အထိ လုပ်စရာရှိတာများကို တရားနည်းလမ်း ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှ အတက်နိုင်ဆုံး ရွက်လွှင့်ကြပါမယ်’’ ဆိုပြီးတော့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက် လင်းလင်းက ဒီအမှု မပြီးမချင်း သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ရေးတင်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
‘’ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တရားခံအစစ် တကယ်ရှိရမယ်။ တစ်ဦးထဲလား ?။ တစ်ဦးထက်ပိုလား ? လက်ရှိစွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့သူဟာ အစစ်လား? ဒီအမှုတွင်ဖုံးကွယ်မှုများရှိလား? ရှိရင် ဘယ်လိုလူများနဲ့ ဘယ်လိုအသိုင်းအဝိုင်းလဲ? အဲဒီမေးခွန်းတွေအတွက် ဒီနေ့ နေပြည်တော်ကိုရောက်ပါတယ်။ ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှု မပြီးမချင်း ကျွန်တော့် wall မှာ ဘာမှတင်ဖို့မရှိပါဘူး။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်ဘာတင်တင် ဗစ်တိုးရီးယားလေးရဲ့အမှုနဲ့ ပတ်သတ်တယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ’’လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ဆောင်ရွက်ရတဲ့အပေါ်မှာလည်း သူ့အပေါ်ချီးကျူးစကားပြောဆိုတာထက် ပါဝင်ကူညီကြသူတွေကို ပိုပြီးတော့ ချီးကျူးစေချင်တယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
‘’ဒီအတွက်လည်း ကျွန်တော့်ကို မချီးကျူးပါနဲ့။ ကျွန်တော့်ကိုချီးကျူးထောပနာပြုတာထပ် ဒီအမှု အစ,ကနေ ယခုထိ နည်းမျိုးစုံနဲ့ စေတနာသန့်သန့်ပါဝင်ရပ်တည်ကြတဲ့ တ်ဆွေမိသားစုများကိုသာ ချီးကျူးစေချင်ပါတယ်။ ဒီအမှုကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဒီလိုပါဝင်ရတာဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမုန်းတရားနဲ့ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငြိုးတေးမှုမရှိပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှ အရှက်ခွဲလိုခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ တရားခံအစစ်မတွေ့ဘူး (သို့) တရားခံအစစ်မဟုတ်ဘူး (သို့) တရားခံအစစ်မပေါ်ဘူး ဆိုရင်,ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးကို တရားဥပဒေက မုဒိန်းကျင့်တယ် ထင်လို့ပါ။ယခုမှစပြီး အများသိသင့်တယ်ဟု ထင်သောအရာများကိုသာ တင်ပါမည်။ အစွန်းများကိုဆင်ခြင်ရေးပါမည်။အတက်နိုင်ဆုံးဒေါသကို ဖယ်ရေးပါမည်’’ လို့ ဆက်လက်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
လင်းလင်းဟာ ဇနီးဖြစ်သူ ချစ်သုဝေနဲ့အတး သမီးလေးတွေရဲ့ နာမည်နဲ့ “ခေတ်သစ်”ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာကို တည်ထောင်ထားပြီး မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါရှင် ကလေးတွေအတွက်ကိုလည်း ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်မှု ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်များ ဖြစ်သလို လင်းလင်းဟာ လည်း ဂီတလောကမှာ တစ်ကိုယ်တော်ပွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိထားကာ ချစ်သုဝေဟာလည်း သရုပ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ အဆိုပိုင်းမှာ ပရိသတ် အား ပေးမှု ရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။